'आधुनिक्तामा मौलाउदै जनकपुरधाम को संस्कृति'
२५ माघ, २०७५ || प्रकाशित १०:०२:००
विषय फरक छैन हरेक बर्ष केहि भ्रमक लेख र टिप्पणिको सिकार म स्वंयम भएको छु ।
केहि येता सम्म आउदा र नियाल्दा अब संस्कृतिलाई थप संरछ्यणको आवस्यक्ता छ, जस्तो लागिरहेको छ । मैले यस लेख बारे लेखि रहदा म आफुलाई कुन धारमा राखेर लेखु भन्ने सोचले पिरोलि रहयो। किन ?? प्रस्ट छ मेरो पुर्खाले दिएको संस्कृति थप विलिन हुदैछ । आज २१औ सताव्धिमा हामिले आफूलाई जतिनै युनिक अर्थात फरक बनाउन खोज्छौ त्यो केहि हदसम्म सहि होला तर केहि सिमित इच्छा सम्म राख्दा झन ठिक हुन्छ होला ।
अहिलेको जुन विदेशि समानमा क्रेज देखिएको छ त्यसले भोलि नराम्रो अवस्थाको स्रजना गर्ने छ भन्ने डर लाग्नु स्वभाविक हो । मैले यस लेखलाई थप प्रस्टाउने मौका पाउने छु या छैन त्यो सरोकारको बिषय हुदै होईन । तर आम युवा जसले यो समाज परिवर्तन गर्नु पर्छ भनिरहदा कस्तो समाज परिवर्तन खोजेका हुन् भन्ने प्रस्न त सोध्न सकिन्छ होला नि ?? हो अहिले पनि हामि परिवर्तन को नारामा परिवर्तित छौ तर हामिले उठाएका मुद्दा के समाज उपयोगि छ भन्ने हेक्का राख्ने कि नराख्ने भन्ने बिषय थप प्रस्ट हुन जरुरि छ ।
दिवाकर उप्रेति, युवा अभियन्ता
सन्दर्भ सरस्वति पुजा जनकपुरधाम। बिषय सहज छ टिका-टिप्पणि पनि पहिलै देखि चल्दै आएको छ तर त्यस बिषयलाई थप सस्कतिकरण गर्ने कसरि भन्ने प्रस्न म का थुप्रै आएका छन् । तर त्यसको प्रस्तुति र त्यसको इन्टायर खाका कस्तो भन्ने सोचि रहदा खेरि थप गार्हो पर्यो । किन भन्दा जनकपुरधामलाई मैले जति बुझेको छु सायद त्यसवाट म निकै सतर्क भएको छु । सरस्वति पुजा अर्थात माता सरस्वति संग सद्वुधि आओस पडाई राम्रो होस भन्दै पुजा गर्ने दिन हो ।
तर एक झल्को त्यसदिन लाई नियाल्ने हो भने कहि नकहि हाम्रा समाजको बिकृत फस्टाउने दिन त होईन भनेर डर रहने गर्छ । पहिलेको चलन - हेर्ने हो भने त्यस दिन बिधार्थिहरुले विहान उठि मन्दिर गई पुजा पाठ गरि घर फर्किने चलन रहि अाएको छ ।। तर अहिले सन्दर्भ ठिक उल्टो छ त्यसदिन पुजा पाठ नभइ विहान उठि कुन लुगा लाउने र कुन ठाउमा गई राय्किङ गर्ने भन्ने केटा /छात्र ले सोच्छन भने कटिहरु /छात्रा ले कुन ड्रेस लगाई हिड्दा मलाई नियाल्छन भन्ने अनैतिक मानसिक्ताको सिर्जना भएको देखिन्छ ।
यसलाई थप हेर्ने हो भने त्यस दिन जस्तै छैठ पुजामा पनि अवस्था त्यसरुप नै हुनेगर्छ ।। यि अवस्थालाई कसरि हल पार्ने भन्ने बिषय थप जटिल छ । जनकपुरधाम का युवा अगुवाई / नागरिक समाज र अभियान्ता जति नै सम्वेदनशिल भए त्यस समस्याको हल त्यतिनै चाडै निर्मुल पार्न सकिन्छ ।। मेरो विचारमा बिधार्थि संग संगै गार्जेन पनि उतिकै जिम्मेवार हुन। अाफ्नो छोरा छोरिलाई सस्कृतिको परिधिभित्र राख्नुको सट्टा आफू रुपि छोड्ने गलत निर्णयले गर्दा समाजमा नकारात्मक अवस्था छ ।
यस बिषय जति सहज लागेनि समाजको नकारात्मक इस्थितीको सिर्जना गरेको छ । युवा पिडिलाई थप जटिलता तिर ढक्लिदै छ । युवा पिडिलाई सस्कृति संरछ्यण को सट्टा थप विदेशि पन सिकाउनुले हामि अब सस्कृति बिहिन हुने छौ भन्ने निस्चित देखिन्छ ।
अहिले पनि धेरै ढिलो भएको छैन थप जागरुक्ता ल्याउन सबैले अाफ्नो स्तरवाट भुमिका निर्वाह गर्न जरुरि देखिन्छ ।